Yintoni Colblindor? - 💡💻 Iris - Software ukuze kukhuselwe Eye, Health and Productivity 🛌👀
Umbala blindness ngokuqhelekileyo kwenzeka xa umntu akakwazi ukubona imibala kwindlela eqhelekileyo.
Le blindness mbala eyaziwa ngokuba ukuhluleka umbala.
Le ngxaki kudla ngokwenzeka xa umntu akakwazi Makangagocagoci phakathi imibala ethile.
Ingxaki ngokubanzi kwenzeka phakathi kwamabala kunye neentsingiselo ezahlukeneyo Imibala, kwaye Lumana shades blue.
Ngokomthetho, kukho ezimbini iiseli ezikhoyo kwiretina yethu.
Zombini ezi iiseli zisetyenziselwa ukubona ukukhanya. Ezi ndibano ezibizwa ngokuba cone iintonga. Iintonga Ukubona mnyama kuphela nokukhanya kusabela kakhulu moya ekukhanyeni low. Iiseli cone zisetyenziselwa ukubona umbala.
Ezi seli bebekelwa kumbindi umbono wakho. Ngokubanzi, kukho iintlobo ezintathu cone ukuba umbala i.e ukubona. luhlaza, eluhlaza nebomvu.
Ubuchopho isebenzisa igalelo kwezi cone ukuze ukuseka umbala esiqonda ngayo.
njani umbala ukungaboni kwenzeka?
Umbala sightlessness nga ngokuqhelekileyo kwenzeka xa kukho enye okanye ngaphezu kwesinye iiseli umbala cone wayengekho, ukubona umbala eyahlukileyo standard okanye ezingasebenzi kakuhle.
Umbala blindness ngokungenalusini kwenzeka kwiimeko apho zonke iiseli ezintathu cone ezingekhoyo.
Umbala sightlessness wobulali kwenzeka xa omathathu iiseli cone sekukufuphi kodwa enye cone ayisebenzi ngendlela efanelekileyo.
Imiqondiso yokuba imibala zisoloko okuphawulwe abazali xa abantwana besebancinane. Kwezinye iimeko, iimpawu mincinci ukuze ziyekile waphawula.
Iimpawu eziqhelekileyo imibala zibandakanye:
Ukuntsokotha njengombala ngombala owahlukileyo zahluke.
An nokungakwazi ukubona iithowuni kunye izithunzi umbala ofanayo.
Amaqondo of imibala
Kukho izikali ezahlukeneyo umbala sightlessness. Abantu abangeva umthunzi insufficiency ukubona imibala ngokubanzi ekukhanyeni elungileyo kodwa abe complicatedness ekukhanyeni buthathaka.
Abanye abakwazi caluli imibala ethile nayiphi ekukhanyeni. Umbala sightlessness ichaphazela ngokubanzi amehlo omabini ngendlela efanayo kwaye ihlala rhoqo bonke ubomi babo.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga degree of colorblindness, ukuqhuba uvavanyo Vision ziyafumaneka https://iristech.co/test-vision.
Unyango for Umbala Ukumfameka
Akukho unyango olufanelekileyo kunye epheleleyo imibala.
uhlobo olulodwa izibuko kunye lenses ziyafumaneka kwi emarikeni kunye nokubandakanyeka okucoca ezahlukeneyo ukunceda iziphene umbala, ukuba kuyimfuneko.
umbono lwesoftwe kunceda yokwahlula imibala.
Umbala Ukumfameka ayikho "Umbala Ukumfameka"
Inkoliso yabantu bazibandakanye eli gama umbala ubumfama ukuya sightlessness kunye nombala, ebalisa kuzo, ukuba wena colorblind okanye colorblind ngoko ungabona kuphela imifanekiso mhlawumbi imibala emnyama namhlophe okanye.
Ukuba jonga kwi imigaqo ngoko kukho imigqaliselo ezintathu ezahlukeneyo ezaziwayo-kakuhle ezisetyenziswa ukubaqononondisa lo ukukhubazeka:
Umbala Vision Imibala
Yeyona elithi kakhulu ngqo. Icacisa ukuba ungumlwelwe eliqinisekileyo kwindawo kodwa akachongwanga kakuhle nentetho eqhelekileyo.
umbono https://iristech.co/vision/ kuya kukunceda ukwazi ukujamelana ukuswela colorblindness uphethwe. Zikhuphelele le software kwaye ubone ngokucacileyo screen sakho.
Eli gama livela kwi umphandi-ngenkulungwane ye-18 ogama njengoko uYohane wayeseDalton.
Le uphando kwaba colorblind. Yena enzela uphando kwaye acacise esenzeka iphepha yenzululwazi okokuqala.
Nokuthiywa nayo inxulumene phantse kuzo zonke iintlobo imibala ngxaki.
ithunyelwe ku amanqaku
Vala akhawunti yakho?
akhawunti yakho aya kuvalwa kwaye zonke iinkcukacha ziya izakucinywa ngokusisigxina kwaye ayikwazi kubuyiswa. Ingaba uqinisekile?